Valve ရွေးချယ်မှု - သတင်း - Tianjin Allway Valve Co.,Ltd
1. စက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် စက်တွင် အဆို့ရှင်အသုံးပြုမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်၊ အဆို့ရှင်သည် မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သက်ဆိုင်သည့် ကြားခံအား မည်မျှရှိသနည်း၊ အလုပ်ဖိအားနှင့် အပူချိန် မည်မျှရှိသနည်း။
2. အဆို့ရှင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်၏အမည်ခံအရွယ်အစားနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ကို နားလည်ပါ- အနားကွပ်၊ ကြိုး၊ ဂဟေဆော်ခြင်း စသည်ဖြင့်။
3. အဆို့ရှင်လည်ပတ်ရန်နည်းလမ်းကိုဆုံးဖြတ်ပါ- လက်စွဲ၊ လျှပ်စစ်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်၊ အနုမြူ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်၊ လျှပ်စစ်-ဟိုက်ဒရောလစ်ချိတ်ဆက်မှု၊
4. ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းသည့်အလတ်စားအတိုင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဖိအား၊ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်၊ ပစ္စည်း၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ဆုံးဖြတ်ရန် ရွေးချယ်ထားသော အဆို့ရှင်အခွံ၊ သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အလွိုင်းသံမဏိ၊ သံမဏိအက်ဆစ်၊ ကြေးနီသတ္တုစပ်။
5. အဆို့ရှင် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ၊ အဆို့ရှင် အမျိုးအစား၊ ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် ရွေးချယ်ထားသော အဆို့ရှင် ဂျီဩမေတြီ ဘောင်များ ဖြစ်သည့်- ဖွဲ့စည်းပုံ အရှည်၊ အနားကွပ် ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံနှင့် အရွယ်အစား၊ အဆို့ရှင် အရွယ်အစား၏ အမြင့်ဦးတည်ချက်ပြီးနောက် အဖွင့်အပိတ်၊ ဘော့ပေါက် အရွယ်အစားနှင့် နံပါတ် ချိတ်ဆက်မှု၏တစ်ခုလုံးအဆို့ရှင်ပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်အစား;
6. baotou အဆို့ရှင်များကို ရွေးချယ်သည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံ အနည်းငယ်ထက်ပို၍ ရွေးချယ်ခြင်းသာမကဘဲ လိုက်နာမှုအပေါ်အခြေခံ၍ အဆို့ရှင်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရန်- ရွေးချယ်ထားသောအဆို့ရှင် ;
7. အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းကိုရှင်းလင်းရန်၊ အသုံးပြုမှုနှင့်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများ၊ အဆို့ရှင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အမျိုးအစားများသည်ပိုက်ဒီဇိုင်းစာရွက်စာတမ်းများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သင့်သည်၊ အလုပ်လုပ်သောဖိအားသည်ပိုက်အလုပ်ဖိအားထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။
8. အလုပ်လုပ်သော ကြားခံ၏ သဘောသဘာဝကို နားလည်ပါ- အလုပ်ဖိအား၊ အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်၊ သံချေးတက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ၎င်းတွင် အစိုင်အခဲအမှုန်များ ပါဝင်ခြင်းရှိ၊
9. အဆို့ရှင်အရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်: စီးဆင်းမှုခုခံနိုင်စွမ်း, ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း, စီးဆင်းမှုဝိသေသလက္ခဏာများ, တံဆိပ်ခတ်အဆင့်, etc;
10. ရှင်းလင်းတပ်ဆင်မှုအရွယ်အစားနှင့် ပြင်ပအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များ- အမည်ခံအရွယ်အစား၊ ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအရွယ်အစား၊ ပြင်ပအရွယ်အစား သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်၊ စသည်တို့။
11. အဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်ကိရိယာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်များ။